संकटमा संविधान संसोधन : आउने बर्थडेमा खुसी साट्न पाउलान त प्रचण्ड ? – ZoomNP
संकटमा संविधान संसोधन : आउने बर्थडेमा खुसी साट्न पाउलान त प्रचण्ड ? प्रकाशित मिति: सोमवार, मंसिर १३, २०७३ समय - १२:३०:५८ काठमाडौं १३ मंसिर । एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आउने मंसिर २८ गते ६२ बर्ष पुरा गरेर ६३ मा लाग्नेछन् । । यसअघिका दृष्ठान्त हेर्दा सायद उनी जन्मदिन मनाउने छैनन । तर संविधान संसोधनमा मधेसी मोर्चासहितका पक्षलाई सहमतिमा ल्याएर खुसी मनाउने योजना भने उनको पक्कै छ । जन्मदिन आउनुअघि नै संसोधन प्रस्ताव संसदबाट पारित गराइसक्ने ध्याउन्नमा उनी लागेका छन् ।
कहिले बढी समर्थन र कहिले बढी विरोधको नाममा आफूलाई एक्लाउने प्रयास भइरहेका उनको बुझाइ छ ।’ त्यो प्रक्रिया पार्टीचिभत्र पनि देखिएको छ । प्रचण्ड अप्ठ्यारोका कारण नै सरकारले संसदमा दर्ता गर्ने भनेको संविधान संसोधनको प्रस्ताब अन्यौलमा परेको छ । शुक्रबारबाट आइतबार सरेको संसोधन प्रस्ताव आइतबारपनि दर्ता हुन सकेन । आइतबार दर्ता हुन नसकेको संविधान संसोधन अब कहिले दर्ता हुन्छ ? प्रधानमन्त्रीसँग पनि जवाफ छैन ।
प्रस्तावमा सरकारले थप सहमति खोज्ने तयारी गरेको छ । मधेसी मोर्चाको असन्तुष्टि, सत्तासिन दलभित्रैबाट सुरु भएको आलोचना र एमालेको आन्दोलनमा जाने चेतावनीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड संसोधनमा पछि सरेको छ । प्रधानमन्त्रीका राजनितिक सल्लाहकार चक्रपानी खनालले अब मोर्चा र सत्तासिन दलमा पूर्ण सहमति गरेर संसोधन दर्ता गराउने जानकारी दिए । ‘मोर्चाले चुनावमा प्रतिवद्धता जनाउनुपर्ने र सबै घटन सन्तुष्ट हुनुपर्ने विषयमा छलफल भएपछि संसोधन रोकिएको हो ’ उनले भने, ‘अब सहमति खोजेरमात्रै संसोधन दर्ता हुन्छ आज हुन्छ भोलि नै हुन्छ भन्ने अवस्था छैन । ’